सुशान्त मृ त्युको कारण भन्दै सलमान खानसहित ८ जना विरू द्ध मु द्दा दायर !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/सुशान्त मृ त्युको कारण भन्दै सलमान खानसहित ८ जना विरू द्ध मु द्दा दायर !!
एजेन्सी/ बलिउड अभिनेता सलमान खान, निर्माता तथा निर्देशकहरू करन जोहर, एकता कपुर तथा सञ्जयलीला भन्साली सहित आठ जना विरूद्ध फौज`दारी मु`द्दा परेको छ । बुधबार एक वकिलले उनीहरूलाई अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको मृ`त्युको कारण भन्दै बिहार अदालतमा मु`द्दा दायर गरेको भारतीय सञ्चार माध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार वकिल सुधिर कुमार ओझाले सलमान, करनसहित आठ जनाका विरू`द्ध मु`द्दा दायर गरेका हुन् । अदालतले आगामी जुलाई ३ को सुनुवाइ मिति दिएको छ । ओझाले दायर गरेको मुद्दामा आदित्य चोपडा, साजिद नाडियडवाला, भुषण कुमार र निर्देशक दिनेशको पनि नाम छ ।
दुखद खबर चर्चित कोरियोग्राफर सरोज खानको नि`धन !!
कतारले दिएका सहायता सामग्री लिएर नेपाल आइपुग्यो जहाज !!!